मेसी भर्सेस रोनाल्डो : ह्याट्रिक प्रहारमा को उत्कृष्ट?
अर्जेन्टाइन स्ट्राइकर लियोनल मेसी र पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्तमान फुटबल जगतको चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन्। दुबै स्टारले आफूलाई मिल्ने साथी बताए पनि फुटबलप्रेमीहरु उनीहरुलाई प्रतिद्वन्द्वीकै रुपमा चिन्छन्।
फुटबल जगतमा करिब २ दशक एकछत्र राज गरेका मेसी र रोनाल्डोबीच विभिन्न कुरालाई आधार बनाएर तुलना भइरहेको हुन्छ। दुईमध्ये को उत्कृष्ट? हाल फुटबलमा सबैभन्दा बढी सुनिने प्रश्न हो यो।
फरकफरक विषयलाई आधार बनाई गरिने सर्वेक्षणहरुले कहिले मेसी र कहिले रोनाल्डो उत्कृष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्छन्। यी दुई महान खेलाडीबीच ह्याट्रिक प्रहारमा को बलियो भन्नेबारे चर्चा गरौं।
युभेन्टसबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका रोनाल्डोले आफ्नो फुटबल करियरमा ५६ पटक ह्याट्रिक गरेका छन्। उनले च्याम्पियन्स लिगमा ८, घरेलु लिगहरुमा ३६, घरेलु कपमा दुई, फिफा विश्व कपमा एक र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ९ ओटा ह्याट्रिक गरेका छन्।
रोनाल्डोले सन् २००८ को जनवरीमा करियरको पहिलो ह्याट्रिक प्रहार गरेका थिए। उनले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेल्दा न्यू क्यासलविरुद्ध पहिलो ह्याट्रिक गरेका थिए। पछिल्लो पटक उनले सन् २०२० को जनवरीमा काग्लियरीविरुद्ध युभेन्टसको लागि ह्याट्रिक गरेका थिए।
त्यस्तै, बार्सिलोनाबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका मेसीले आफ्नो फुटबल करियरमा ५४ पटक ह्याट्रिक प्रहार गरेका छन्। मेसीले च्याम्पियन्स लिगमा ८, स्पेनिस ला लिगामा ३६, कोपा डेल रेमा ३, स्पेनिस सुपर कपमा एक र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ६ पटक ह्याट्रिक प्रहार गरेका छन्।
मेसीले करियरको पहिलो ह्याट्रिक बार्सिलोनाबाट सन् २००७ को मार्चमा रियल मड्रिडविरुद्ध गरेका थिए। पछिल्लो पटक मेसीले २०२० को फेब्रुअरीमा इबारविरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए।
रोनल्डोले पोर्चुगलको सिनियर राष्ट्रिय टोली र व्यवसायिक क्लबबाट गरी एक हजार ३४ खेल खेलेका छन्। त्यसअनुसार औसतमा १८ खेल खेल्दा उनले एक ह्याट्रिक प्रहार गरेका छन्।
मेसीले अर्जेन्टिनाको सिनियर टोली र व्यवसायिक क्लबबाट गरी जम्मा ८ सय ९२ खेल खेलेका छन्। यसअनुसार उनले औसत १६ खेल खेल्दा एक ह्याट्रिक गरेका छन्।
सबै तथ्याङ्कलाई हेर्दा संख्यात्मक रुपमा रोनाल्डो ह्याट्रिक प्रहारमा मेसीभन्दा बलियो छन्। ह्याट्रिक गर्न लाग्ने औसत खेल संख्या हेर्दा मेसी अगाडि रहेका छन्। (एजेन्सीकाे सहयाेगमा)
#फुटबल #लियोनल_मेसी #क्रिस्टियानो_रोनाल्डो #ह्याट्रिक
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ११, २०७७ ००:०४